Simba reGumi nemaviri Eleven WordPress Dingindira | Martech Zone
Pakupera kwevhiki, ndakachinja yangu WordPress theme kudzoka ku Makumi maviri negumi nerimwe. Ini ndinogona kutaura pachokwadi kuti ndiri kufara nedesheni izvozvi. Ndakaigadziridza zvandinofarira uye ndaisatombofanira kubata iyo kodhi. Iye zvino usandibata zvisirizvo, pane dzimwe nguva apo ini ndinofarira kudhiraivha mukati medingindira uye kubiridzira mari yacho mairi, asi blogging yakaoma zvakakwana sezvazviri. Ini handidi chero kushushikana kwakawedzerwa pamusoro pechinhu dhizaini chisina kumisidzana, kana kukanganisa zvekare zvikanganiso nekuti imwe data haina kupatsanurwa nemazvo. Iye zvino ndinogona kutarisa kublogging.
Iyo Yegumi nemaviri dingindira haisi yakanaka chete uye yakapusa, asi zvakare yakasimba uye yakanyanyisa kuita. Yakagadzirwa nechikwata cheWordPress, zvinoreva kuti vanhu vanonyatsonzwisisa uye vanonzwisisa zviri mukati nekunze zveWordPress vakagadzira dingindira rekutonga zvese.
Makumi maviri nerimwe Elements:
Chiedza uye Rima mavara zvirongwa
Chinja chinongedzo chevara
Makoramu maviri, kurudyi padivi; Makoramu maviri, kuruboshwe padivi; Imwe-ikholamu, hapana sidebar
Mafomati manomwe akasiyana epositi ekusarudza kubva
Chinja iyo yekumberi mufananidzo uye / kana ruvara
Ratidza / viga musoro
Ratidza / viga mifananidzo yakaratidzwa
Ese aya sarudzo anokwanisa kugadziriswa kubva kuChionekeso sub-menyu.
Kunze kwemusoro wenyaya unowedzerwa, iwe unowanawo chaizvo izvo zvaunotarisira kubva kune yakazara-inoratidzwa WordPress theme:
Yakaratidzwa mifananidzo pasiti
Yakazara widget inokwanisa
Akanaka nested makomendi
SEO inoshamwaridzika, kunyangwe iwe uchifanira kufunga kushandisa iyo Yoast WordPress SEO bairira
Chinhu chekupedzisira chauchazoda kuwedzera iyo WP Kubata plugin uye iwe wagadzirira nhare, futi! Ini ndoziva kunzwa kwekuda mhedziso yakanakisa dhizaini / theme yemasaiti angu - nyanzvi uye zvemunhu zvakafanana. Zviri nyore kurasikirwa neicho chako chaicho chinangwa: blogging! Makumi maviri negumi nerimwe ndi vakasununguka chishandiso icho iwe chaunofanirwa kunge uri kushandisa kudzikisira nhamo dzekugadzira uye kugadzirisa iyo WordPress theme.
Dec 5, 2011 pa 11: 55 AM
Ini ndinobvumirana zvachose newe, asi ndichishayikwa chinhu chimwe muna 2011 theme - haitsigire sidebar pane zvakatumirwa uye mapeji, saka chero nguva paunogadzira blog neino nguva iwe unofanirwa kuenda pamusoro zvakare uye kugadzirisa iyo single.php uye peji .php mafaira.
Mar 16, 2012 pa 8: 41 PM
Ndinogona here kukurudzira kushanyira http://www.borgyborgy.net Iyo inopa yemahara 1000 × 288 pixel saizi misoro, kuti ushandise default TwentyEleven theme. Inobatsira kune vanotanga blog. Iyo inokutendera iwe nyore kugadzirisa akajairwa kuisirwa, kubvumira newbie kuve neyakagadziriswa uye yakagadzirira blog mumaminetsi mashoma. Mifananidzo yose inotorwa neni uye inopihwa pasi peCreative Commons 3.0 License.